Maanta oo kale 4 sano ka hor qaraxii weynaa ee ka dhacay Isgoyska Zoobe | Dhacdo
Home Wararka Maanta Maanta oo kale 4 sano ka hor qaraxii weynaa ee ka dhacay...
Maanta oo kale 4 sano ka hor qaraxii weynaa ee ka dhacay Isgoyska Zoobe
Afar sano ayay ku buuxdaa markii weerarka dadka badani ku dhinteen, 14-kii bishii October ee sanadkii 2017 uu ka dhacay Isgoyska Zoobe ee Magaalada Muqdisho.
Gaari nooca xamuulka oo walxaha qarxa laga soo buuxiyay ayaa galabnimo Sabti ahi waxa uu si lama fillaan ahayd ugu qarxay Isgoyska Zoobe, xilli mashquul badani uu ka jiray, laamaha amniga ayaana sheegay inay ku daba jooggeen gaarigaasi.
Dad tiradooda lagu qiyaasay shan boqol oo qof ayaa ku dhintay qaraxaasi, oo illaa iyo hadda aanay jirin cid masuuliyadiisa sheegatay, inkastoo si dhow loola xiriiriyay maleeshiyada Al Shabaab.
Marka laga soo taggo boqolaalka qof ee qaraxaasi ku dhintay, waxaa kaloo jira gaadiid iyo dhismooyin ganacsi oo ku burburay, iyadoo dad hantiileyaal ahaa ay maanta qaarkood ka fara-maran yihiin.
Gudoomiyaha Ururka Haweenka Qaranka, Batuulo Sheekh Axmed Gaballe ayaa maalintii xigtay qaraxaasi waxay bannaanbax ka socday Magaalada Muqdisho kaga hadaaqday dhawaaq aan horey looga maqal dhulka Soomaalida.
“Si gar iyo mag la’aan ah naloogu qarxiyay baabuur laga soo buuxiyay walxaha qarxa ma dhihi karo, nukliyeer baa baabuur lagu soo shubay, waa nala dhex dhigay, waa nalagu gubay. Waxa nagu gubayna waa carruutii aan dhalnay oo aan korinay, oo aan kabinay. Waxaan nahay hooyooyin gablan ah, oo bannaanka iyo gudaha ku gablan ah.” Ayay tiri Batuulo Sheekh Axmed.
Waxa kaloo ay tiri “Qof Soomaali ah oo hilibkiisoo gubtay bac lagu shubo oo dhulka hoostiisa la geliyo, waa taariikh ooyin leh, waa taariikh madow, waa wax maanta Soomaali keeni kara ama inaan jirnoo dagaalano ama in nala laayo oo aan saa u hoggano, oo aan waxba qabsan kari weyno oo adduunyada nalaga dabar-tiro.”
Inta qarax ay dunida ka gaysteen kooxaha hubeysan waxa uu qaraxani noqonaya kiisii ugu waxyeelada badnaa ee laga gaysto goob ay barimageedada ku badan tahay.
Dadka wax fallanqeeya waxay sheegeen inaanay Villa Somalia ka faa’iideysan midnimadii iyo wadajirkii ay xilligaa dadka Soomaaliyeed muujiyeen, haddii ay garteen inaanay mintidiintu cidina dhaafeen.
Previous articleDigniin laga soo saaray baxsashada ninkii dad cunka ahaa
Next articleNin watay leeb iyo qaanso oo dad ku laayay dalka Norway